ချစ်တယ် ခလေးရယ်” – Grab Love Story
“ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ…မကဲနဲ့ အကိုရယ်….အဟင့်…““မီးမှိတ်သွားပါပြီ….ဘယ်သူမှ မမြင်ပါဘူး..အစ်ကိုတို့က နောက်ဆုံးတန်းပဲ လူလဲသိပ်မရှိပါဘူး….““အာကွာ…အစ်ကို့လက်ကြီးကလဲ..ဘော်လီအင်္ကျီပြဲသွားအုန်းမယ်..သူတော်တော်ကဲနော်…အ….ယားတယ်..“ရုပ်ရှင်က ဆူညံသော သေနပ်ပစ်သံများဖြင့် စတင်ပြနေပြီဖြစ်သော်လည်း..ချိုရီနှင့် အစ်ကိုကတော့ မကြည့်ဖြစ်ကြ…။
“ချိုရီ…ကိုင်ထားပေးပါလား…ရော့ ဒီမှာ…““အာ….ကွာ….ဟင့်အင်း…ရွံတယ်…““နောက်ဆို ပါးစပ်နဲ့တောင် စုပ်ရအုံးမှာ..ပဲကွယ်…“ “စုပ်မယ်…အားကြီး….ဟင်း….““လုပ်ပါ ချိုရီရဲ့…ကိုင်ထားပေးရုံလေးပါ..နော်…“အစ်ကိုက ပုဆိုးကိုလှန်ပြီး မာတောင်နေသော သူ့လီးကြီးကို ချိုရီရဲ့ လက်ဖဝါးနုနုလေးထဲ အတင်းထည့်ပြီး ကိုင်စေ၏..။
“အာ….အဟင့်…ကိုင်ချင်ပါဘူးဆိုကွာ…ဟင့်အင်း…ကြည့်ပါအုံး…တဆုပ်တခဲကြီး…တင်းပြောင်နေတာပဲနော်…“နွေးနွေးကြီးဖြင့် မာကျောကာ တဆတ်ဆတ်လှုပ်ရှားနေသော အကြောအဖုအထစ်များဖြင့် အစ်ကို့လီးကြီးကို ချိုရီ မရဲတရဲလေး ကိုင်ထားရင်းမှ အစ်ကိုမခိုင်းပဲ ဂွင်းတိုက်ပေးနေမိပြန်သည်..။ အစ်ကို့ပါးစပ်မှ တဟင်းဟင်း အသံလေးများထွက်လာပြီး ချိုရီနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ဆတ်ခနဲဆွဲယူပြီး ငုံခဲလိုက်သည်..။ ပြီး….လျှာကြီးက ချိုရီ့ ပါးစပ်လေးထဲသို့ ဟိုဒီ လှုပ်ရှားတိုးဝင်လာလေသည်..။
“ဟင့်….“ချိုရီက ရင်လေးကော့ပြီး အစ်ကို့ခေါင်းကို ကိုင်ရင်း မသိမသာလေး တွန်းဖယ်နေ၏..။ ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း အစ်ကို့လီးကြီးကို ဒစ်ပေါ်အထိ လက်ချောင်းများဖြင့် ပွတ်သပ်ရင်း မနားတမ်း ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်မိသည်..။ အစ်ကို ကဲလာပြီ….။ချိုရီ့ ထမီလေးအောက်မှ လက်ကို လျှိုနှိုက်ပြီး စောက်စိလေးကို ထစ်ခနဲ ထစ်ခနဲ နေအောင် ပွတ်သပ်ပေးနေပြန်ရာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမို့သာ ၊ တစ်နေရာမှာဆိုရင် အစ်ကို့အလိုကျ အလိုးခံပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ ပြင်းထန်လာသည်..။
အတန်ကြာ ဂွင်းတိုက်ပေးနေသော ချိုရီ့လက်ကလေးတွင် ပြစ်ချွဲစေးထန်းသော အရေများ ပေကျံကုန်သည်..။ ချိုရီ လန့်ပြီး အစ်ကို့ပုဆိုးနှင့် ပွတ်သုတ်လိုက်သည်..။“ဘာတွေ…ထွက်ကုန်တာလဲ မသိဘူး..“ချိုရီက အမှောင်ထဲမှ လီးကြီးကို ငုံ့ကြည့်ရင်း ပြော၏..။ စင်စစ် ချိုရီတစ်ယောက် ယခုကဲ့သို့ တပါးသောယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၏ လိင်အင်္ဂါကို ကိုင်ဖို့ မဆိုထားဘိ…အရွယ်ရောက်သော ယောက်ျားတစ်ရောက်၏ တန်ဆာကိုမျှ မြင်ဘူးခြင်းမရှိခဲ့…။
အလားတူ မိမိစောက်ဖုတ်လေးကို ယခုကဲ့သို့ ထိုးနှိုက်မွှေနှောက်ဖို့ မဆိုထားနှင့် ၊ မိန်းမချင်းပင် မမြင်ရအောင် ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ နေခဲ့သူကလေးဖြစ်သည်..။ ယခုမူ အစ်ကို့လက်ကြီးများက မိမိစောက်ပတ်ကျဉ်းကျဉ်းတင်းတင်းလေးကို ရွစိစိဖြစ်လာအောင် အမျိုးမျိုး ဖြဲ၍တစ်မျိုး..ထိုး၍တစ်ဖုံ…ကိုင်တွယ်နေသည်မှာ ချိုရီ့ အပျိုစင်ဘဝလေး၌ ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်၏ စောက်ဖုတ်နှိုက်ခြင်းကို ပထမဆုံး ခံရခြင်းဖြစ်၏..။
သည်မျှနှင့်လည်း အစ်ကိုသည် အားရပုံမပေါ်သေး..။ ချိုရီ့ ဘော်လီအင်္ကျီလေးအောက်မှ နူးညံ့အိစက်သော နို့လေးနှစ်လုံးကို လက်လျှိုနှိုက်ပြီး လုံးခြေနယ်ဖတ်နေပြန်ပါသည်..။ ချိုရီ ထွန့်ထွန့်လူးအောင် ခံစားရ၏..။ဘာကြောင့် သည်အရာများကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ကာမအရသာတို့သည် စောက်ခေါင်းလေးအတွင်း၌ ယိုစိမ့် ဖိတ်စင်ကျလာအောင် ကောင်းရပါသနည်း….ဆိုသည်ကိုမူ ချိုရီ တကယ်မဝေခွဲတတ်..။
“အင်္ကျီတွေ ကြေကုန်ပြီ…အစ်ကိုရာ….“လှိုက်လှိုက်မောမော ချိုရီ တောင်းပန်တိုးလျှိုးပေမဲ့လည်း အစ်ကို တစ်ပြားသားမျှ မလျှော့..။ နောက်ဆုံး အားမလိုအားမရ ဘော်လီအင်္ကျီလေးကို မတင်လိုက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးဖြင့် နို့ဆာနေသော ခလေးငယ်ပမာ တပြွတ်ပြွတ် စို့နေပြန်တော့သည်..။ချိုရီ တစ်ကိုယ်လုံး ရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်း အရသာတွေ့ခြင်းများ ရောနှောကာ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောအချဉ်များ တောင့်တင်းကွေးကောက်သွားပြီး အစ်ကို့ပုခုံးကြီးများကို အမှတ်တမဲ့ ငုံ့ပြီး ကိုက်ခဲထားရင်း စောက်ခေါင်းလေးထဲမှ အရေများ တဘွပ် ဘွပ် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိတော့သည်..။
ဟင့်ကွယ်….လုံချည်တွေ ပေကျန်ကုန်ပြီ..ဒုက္ခပဲ..“ချိုရီ ..စိတ်ထဲမှ ငြီးတွားရင်း အတင်းတွယ်ကပ်နေသော အစ်ကို့ကို မနည်းကြီး ခွာထုတ်ပြီး အချော့နမ်းလေးဖြင့် သူ့နှုတ်ခမ်းကို ပြွတ်ခနဲ နမ်းပြီး…..“တော်တော့ကွယ်…နောက်မှ…နော်..ကို…“ဟု ချော့မော့နှစ်သိမ့်ပြီး လူချင်းခွာလိုက်ရသည်..။ ဒါတောင်မှ အစ်ကိုက အရှိန်မသေပဲ တငေါက်ငေါက် တောင်နေဆဲ သူ့လီးကြီးကို ချိုရီအား အုပ်ကိုင်ထားစေသည်..။ ချိုရီ..အင်္ကျီများ နေသားတကျဖြစ်ချိန် ၊ ထမီလှည့်ဝတ်ပြီးချိန်တွင် ရုပ်ရှင်ရုံမှ အားလပ်ချိန် မီးများလင်းသွားလေရာ ချိုရီ မျက်နှာလေး ပူထူပြီး အစ်ကို့ကို မကြည့်ရဲတော့ပဲ တွင်တွင်ကြီး ငုံ့ထားမိသည်..။“ပြန်မယ်…ကို..ရယ်…“ချိုရီ ငိုသံလေးစွက်ပြီး တိုးတိုးလေးပြောမှ အစ်ကိုက ချိုရီ့လက်ကလေးကို တယုတယ ကိုင်ဆွဲပြီး ရုပ်ရှင် မကြည့်တော့ပဲ ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြလေသည်..။ —————-×—————–×——————- “ဘာဇာတ်ကားလဲ…ဘယ်ရုံမှာလဲ..“ဟု ချိုရီ့ကို မေးလျင် ချိုရီ ဖြေတတ်မည် မဟုတ်…။ ရယ်စရာတော့ ကောင်းသည်..။ အင်္ဂလိပ်ကားဟုသာ ချိုရီ မှတ်မိသည်..။ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်လိုက်နာမည်တွေ ချိုရီ ဘာမှ မသိ….မသိ…။ သိဖို့ အချိန်လေးတောင်မှလဲ ချိုရီ မရခဲ့…။ရုံထဲ စဝင်ကတည်းက မောလှိုက် ရင်ဖိုရင်း တစ်ခါမျှ မခံစားရဘူးသော စောက်ဖုတ်နှိုက်ခြင်း ၊ နို့စို့ခြင်း ၊ နှုတ်ခမ်းစုတ်ခြင်း များကို တရစပ် ခံစားနေရ၍ လောကကြီးတွင် ထိုချိန်က တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လည်း ချိုရီ သိမည်မဟုတ်..။ နေ့လည်က အဖြစ်ကလေး ပြန်တွေးရင်း ချိုရီ ဈေးရောင်းလို့ မဖြောင့် ။ အစ်ကို့ အကိုင်အတွယ် အပွတ်အသပ် အနှိုက်အစုပ်များကိုသာ တွေးနေမိသည်.. ဟင်းခနဲ ကြိတ်ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်သော အခန်းအပြင်မှ အဖေအသံကြားမှ ညအတော်နက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတိထားမိသည်..။ထို့ကြောင့် ပြုနေကျအတိုင်း အမေ့ကုတင်ဆီ ထလာခဲ့ရသည်..။ လူမမာ အမေသည် ဆေးတန်ခိုးဖြင့် အိပ်မောကျနေပြီ ဖြစ်သည်..။ အဖေမှာ ညနေပိုင်းသောက်ထားသော အရှိန်ဖြင့် ကုတင်အောက်ကြမ်းပြင်၌ အင်္ကျီမပါ လုံချည် မလုံမလဲဖြင့် ပိုးလိုးပက်လက် အိပ်နေသည်..။ ချိုရီက လမ်းမီးရောင်ဖြင့်ပင် အမေ့ခြင်ထောင်ကို ချပေးပြီး သေသပ်စွာ ဖျာအောက်သို့ဖိရင်း ပြန်လှည့်ထွက်လိုက်သည်..။“ဟင်းအင်း…ကျွတ်ကျွတ်…ပြွတ် …ပြွတ်….ပြွတ်……“အဖေသည် မျက်လုံးမဖွင့်ပဲ သူ့လိင်တန်ကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နှင့် ဂွင်းတိုက်ကာ ပက်လက်ကြီး ငြိမ်သွားပြန်သည်..။“ဟဲ့အယ်….လီးကြီးကလဲ…….“ချိုရီ မျက်ခုံးထူထူလေးများ ပင့်တက်သွားရ၏…။အဖေသည် ဂေါ်ရခါးစပ်သောသူဖြစ်၍ အသားမဲပြီး ထွားကြိုင်းလှသူဖြစ်သည်..။ယခုမူ …အဖေ့လီးကြီးကို ချိုရီ မမှိတ်မသုံ ကြည့်နေမိသည်..။ နေ့လည်က ဟင်းချက်စားခဲ့သော ခရမ်းညိုအရှည်သီးနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ တူလှပေသည်..။ ချိုရီတို့ အိမ်ရှေ့ဓါတ်တိုင်မီးက အိမ်ထဲအထိ ထင်ရှားစွာ လင်းသည်မို့ အဖေ၏ တောင်မတ်ကာ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တုံခါနေသော ဂေါ်ရခါး လီးကြီးကို ချိုရီ နှုတ်ခမ်းလေးများ တုန်ရီနေရင်းမှ အနားသို့ တိုးသွားပြီး သေသေချာချာ ကပ်ကြည့်နေမိသည်..။အဖေ့လုံချည်က ကွင်းလိုက် ခါးပေါ်ရောက်နေပြီး အောက်ပိုင်း ဗလာကြီးဖြင့် ထူထဲသော ကွေးကောက်နက်မှောင်နေသည့် လမွှေးများကြားမှ ကျောက်တိုင် အမဲကြီးအလား မတ်ထောင်နေသော လီးကြီးမှာ တစ်ပေကျော်ကျော်ခန့်မျှပင် ရှိလေမည်လား ထင်ရသည်..။ ပြဲလန်နေသော ဒစ်ကြီးမှာ ငါးရှဉ့်ခေါင်းကြီးနှယ် မီးရောင်ဖြင့် ပြောင်လက်ကာ တဖိတ်ဖိတ် တောက်နေလေသည်..။ အကြောအပြိုင်းပြိုင်း ထကာ ရစ်ပတ်ခွေနွယ်နေသော လီးကိုယ်ထည်လုံးပတ်ကြီးက မဲပြောင်နေပြီး အရေများ စိုရွှဲလိမ်းကျန်နေသည်..။အဖေသည် အမေ့ကို မလိုးရသည်မှာ ကြာလှချေပြီ..။ အမေနေမကောင်းသည်က တစ်နှစ်ကျော်နေပြီ ဖြစ်သည်..။ တခါတရံ အဖေ ဗားကရာချောက်ထဲမှ ပြည့်တန်ဆာမတွေထံ သွားသွားနေကြောင့်တော့ ချိုရီ သိသည်..။ ဒါလည်း အမေသိသည်..။ ယောက်ျားဆိုသည်က နှစ်နှင့်ချီပြီး မလိုးပဲ မနေတတ်သော သတ္တဝါမျိုးဟု အမေနားလည်သည်..။ ချိုရီသည်လည်း အဖေ့ကို သနားသည်..။ ချိုရီ ကိုးတန်းအထိ အဖေ ပန်းရံ ကူလီ …ရေထမ်း အမျိုးမျိုး လုပ်ကိုင်ရင်း ကျောင်းထားပေးခဲ့ရှာသည်..။ အဖေ အရက်မူးကာ အိပ်မောကျနေပြီ…။ချိုရီ အဖေ့လီးကြီးကို မရဲတရဲလေး လက်ညှိုးထိပ်လေးဖြင့် ထိကြည့်လိုက်သည်..။ အဖေ မလှုပ်…။ ချွဲပြစ်စိုရွှဲနေသော အရည်များဖြင့် လီးကြီးက ပိုမို မာတောင်လာနေသည်..။ ချိုရီ့ စောက်ဖုတ်လေးမှာလဲ ယားကျိကျိဖြင့် ခံချင်လွန်းလာသည်..။ နေ့လည်က အစ်ကို နှူးနှပ်ထားသော အရှိန်ကလည်း ရှိနေသည်..။ ချိုရီ အဖေ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ဖြဲချလိုက်သည်..။ ပြွတ်ခနဲ အရေပြားများပြဲလန်ပြီး လီးထိပ်ကြီးက ခရမ်းသီးထိပ်ပမာ …တဖိတ်ဖိတ် တောက်ပြောင်လာသည်…။ ချိုရီ ထမီလေး မတင်ကာ အဖေ့လီးကြီးပေါ်၌ ခွထိုင်ပြီး…ဖြေးဖြေးလေး ထိကပ်ကြည့်သည်..။ “ဟင့်…“ချိုရီ လည်ချောင်းထဲမှ အသံတစ်သံထွက်သွား၏..။ ဒစ်ကြီးက ထစ်ခနဲ ခုန်ဝင်သွား၍ ဖြစ်သည်.. .။ အဖေ မူးနေဆဲ…အိပ်နေဆဲ..။ဝင်လာသော လီးထိပ်ဒစ်ပြဲပြဲကြီး…ချိုရီ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ ပြည့်ကြပ်ပြွတ်သိပ်နေ၍ ဆက်ပြီး မထိုင်ချရဲ..။ မကုန်းမကွနှင့် ငုံ့ကြည့်ကာ အသာလေး ဖိသွင်းချလိုက်ပြန်သည်..။ “ဗြစ်..ဗြစ်…ပြွတ်……..““အွန့်….အွန်း…………….“ချိုရီ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းလေးဖြင့် ခေါင်းလေးမော့သွားပြီး လက်သီးလေးများ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်လိုက်မိသည်..။နှစ်လက်မခန့်ဝင်သွားသည်နှင့်ပင် ချိုရီ ဖင်စအိုပါမကျန် ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကောင်းသွား၍ ဖြစ်သည်..။ သည်…ဧရာမလီးကြီးကို ချိုရီ့ အပျိုစင်စောက်ဖုတ်ကလေးက တင်းကျစ်စွာဖြင့် ညှစ်ပြီး မသိမသာလေး ထလိုက်ထိုင်လိုက် လှုပ်ခါ လိုးနေမိလိုက်သည်..။ လူအိပ်နေသော်လည်း လီးက မအိပ်ပေ..။ မတ်ထောင်နေသော လီးကြီးက ပြည့်ကြပ်ပူနွေးသော အရည်ရွှဲနေသည့် စောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုကို လိုးနေရမှန်း မသိပေ….။သို့သော်လည်း ယောက်ျားတို့သဘာဝ အိပ်မောကျချိန်၌ပင် မတ်ထောင်နေသော လီးကြီးကိုဖြင့် ချိုရီတစ်ယောက် စေတနာအပြည့်ဖြင့် ပြုစုယုယကာ လိုးပေးနေရှာလေသည်..။ ချိုရီ တဝက်မျှပင် ဝင်အောင် မသွင်းရဲ..။ မိမိစောက်ဖုတ်လေးလဲ ပြဲကွဲသွားမည်ကို သိနေ၏..။ ထို့ကြောင့် ဒစ်ကြီး ဝင်ထွက်ရုံမျှသာ လိုးပေးပြီး မိမိစောက်ခေါင်းလေးထဲမှ အတင်အဓမ္မ အရှိန်တက်လာသော နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှ တစ်လက်မခန့် ထပ်ပြီး ဖိသွင်းထိုင်ချလိုက်မိလေသည်..။“ဗြစ်…ထုတ်..ထုတ်……… ထစ်ခါ..ထစ်ခါ ဝင်သွားပြီး စောက်ပတ်အုံလေးတစ်ခုလုံး ပြဲကွဲပြီး တစစီလွင့်စင်သွားမလောက် နာကျင်လာသဖြင့် အသာပြန်ပြီး ထလိုက်ခါ နဂိုအတိုင်း ဒစ်မြုပ်ရုံသာ ပြန်လိုးနေမိပြန်သည်..။ ထိုစဉ် အမေ့ခြင်ထောင် လှုပ်လာသဖြင့် ချိုရီ အသာလေး လီးကြီးပေါ်မှ ကျော်ဆင်းလိုက်ရလေသည်..။
“ပြွတ်…ဘတ်…“ချိုရီ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ ပြွတ်ခနဲ ကျွတ်ထွက်သွားသော လီးကြီးသည် အဖေ့ဗိုက်ပေါ်သို့ အရှိန်ဖြင့် ဘတ်ခနဲ ကျသွားပြီး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်နေသည်..။ချိုရီ ထမီလေးပြန်ဝတ်ပြီး မိမိအခန်းထဲသို့ ပြန်ဝင်လာခါ ခြေရင်း၌ ပုံထားသော ထမီအဟောင်းတစ်ထည်ဖြင့် စိုရွှဲပေရေနေသော မိမိစောက်ဖုတ်လေးကို သုတ်သင် သန့်ရှင်းပြီး အိပ်ယာထဲ ဝင်ခဲ့လေသည်..။
ရင်ထဲ၌ ကတုန်ကရင် အမောကြီးကား လှိုက်ဖိုနေဆဲ…။ အဖေကတော့ ဘာမှ သိမည်မဟုတ်..။ အဖေ့လီးကြီးမျိုးနှင့်သာ အလိုးခံလိုက်ရပါက ချိုရီ့ စောက်ဖုတ်လေးလဲ အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ကွဲကုန်မလားဟု တွေးရင်း အိပ်ပျော်သွားလေသည်..။
——————-×———————-×—————–မနေ့က …ဘာလို့ မလာတာလဲ…အစ်ကို..““လာပါတယ်..ချိုရီမှ မရှိတာ..“အော်….ချိုရီမရှိခင်..အစ်ကိုလာတာ ထင်တယ်… ချိုရီ မြေနီကုန်းမှာ အရက်သွားယူနေတာ..“ချိုရီက အစ်ကို့ရှေ့သို့ အပိုင်းပုလင်းနှင့် အမြည်းများ ချပေးရင်း မျက်နှာကို မကြည့်ပဲ ရှက်ရွံ့စွာပြောနေသည်..။ “ချိုရီ…..““ဟင်…လို့…..““အားတဲ့ တစ်နေ့လောက်….အပြင်ထွက်ခဲ့ပါလား….ဟင်..“ချိုရီ သက်ပြင်းချသည်..။ မျက်နှာလဲ ညှိုးရသည်..။“အစ်ကိုလည်း သိသားနဲ့ကွယ်…ချိုရီ့အလုပ်က အားတယ်ဆိုတာမှ မရှိတာ…ဟိုနေ့ကတောင် ဈေးမှာ အမြည်းအတွက် သွားဝယ်ရင်း မမျှော်လင့်ပဲ အစ်ကိုနဲ့ ဆုံတာ..သိလား…““အင်းလေ… ချိုရီ ပျော်တယ်မို့လား….““ဟင့်အင်း….ဒူးမခိုင်ချင်ဘူး…အစ်ကို ဆိုးတယ်……“ ချိုရီက ဂေါ်ဖီထုပ်ကို ဓါးပါးလေးဖြင့် လှီးရင်း ခေါင်းလေးငဲ့စောင်းကာ အပြုံးလှလှလေးဖြင့် နှုတ်ခမ်းစူပြီး ပြော၏….။ ချိုရီ စပယ်တင်မှဲ့လေးက ပို၍ အလှကျက်သရေ တိုးစေ၏..။ ပြုံးလိုက်တိုင်း ဝင်းလက်သွားသော သွားတက်လေးက လက်ဝဲဘက်၌ အထင်အရှားရှိသည်..။ချိုရီသည် အမှန် လှပလွန်းသူလေးတည်း..၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း ပြောခဲ့ဘူးသလို တစ်တစ်ရစ်ရစ် ဖြစ်ညှစ်ပစ်ချင်စရာ ၊ အဖုအထစ် အမို့အမောက် အဖွံ့အကားတို့မှာ အပိုအလိုမရှိ…။ ယင်းအလှတို့ကို ချိုရီက သူမစရိုက်အတိုင်း အင်္ကျီကြပ်ကြပ်လေးများဖြင့် ထမီကို တင်းနေအောင် ခပ်တိုတို ဝတ်ထားပြန်သောအခါ တင်ပါးကြီးနှစ်လုံး ၊ နို့ကြီးနှစ်လုံးတို့က “ကျမ အပျိုဖြစ်နေပြီ..လိုးလို့ရနေပါပြီ ရှင် ….“ ဟု အစ်ကို ကာလသားများကို ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားသည်နှင့် တူလှသည်..။ ချိုရီတို့ဆိုင်နှင့် မျက်စောင်းထိုးမှ မလှဝင်းတို့ သားအမိကျပြန်တော့ ဝါးခြမ်းပြားကို ထမီပတ်ထားသလို ပြားချပ်နေကြသည်..။ သို့သော် သူတို့က အရက်သောက်လာသူများကို ဆေးလိပ်မီးညှိပေးရင်း မသိမသာ နို့လေးနှင့်လဲ ဖိကပ်ပွတ်သပ်၏..။ တင်ပါးလေးဖြင့်လည်း မတော်တဆလိုလို ပွတ်တတ်၏…။ ချိုရီ သည်လိုမျိုးတော့ အပေါစား မဆန်ချင်..။မရောင်းရရင် နေပါစေ…မရောင်း..။ အစ်ကို့လို အမြဲလာသောက်နေသူတွေ ဒုနဲ့ ဒေး …။ ဟီးနိုး ကားအပျက်ဝင်းအတွင်းမှ စိန်သောင်းဆိုလည်း ချိုရီ့ ဖောက်သည်ဖြစ်သည်..။ ချိုရီ့ ဆိုင်က အရက်ကုန်နေပြီဆိုလည်း အမြည်းတော့ ထိုင်စားသွားတတ်သည်..။ အဲ…ကိုစိန်သောင်းက ညစောင့် …….ရေရွှင်သည်..။ ချိုရီ့ ကို နှုတ်နဲ့ရော စာနဲ့ရော မေတ္တာတောင်းခဲ့ဖူး၏..။ “ချိုရီက ငယ်ပါသေးတယ်..ကိုစိန်သောင်းရယ်….“ဟု ချိုရီက လိမ်လိမ်မာမာ အပြုံးလေးဖြင့် လှန်ထားခဲ့သည်..။“ချိုရီ …ချစ်တတ်လာတဲ့ နေ့ကို ကျနော် စောင့်နေမှာပါ….“စိန်သောင်းကလည်း သည်နှယ် ဇွဲနပဲ နှင့် စောင့်သည်..။ အစ်ကိုကလည်း အပြင်သွားဖို့သာ တဂျီဂျီ…။ အပြင်ဆိုတဲ့ နေရာရောက်လို့ကတော့ ချိုရီတို့…အလိုးခံရပြီ….ဒါ ကျိန်းသေ…။ အစ်ကို ဒါကြောင့်ပဲ လာလာပြီး တွတ်ထိုးနေတာ မို့လား…၊ တကယ်တော့ အစ်ကိုရယ်…ချိုရီလည်း လိုက်ချင်ပါတယ်…အစ်ကိုနဲ့ တဝကြီး လိုးပစ်လိုက်ချင်တယ်…အခြေအနေက မပေးဘူး…။ညနေက အစ်ကို့မျက်နှာညှိုးသွားသည်ကို ချိုရီ စိတ်မကောင်း…။ ခုလို ညဘက်ကျပြန်တော့ အစ်ကိုက မအား..။ ညဆိုင်း ဆင်းရသည့် ဆောင်လုပ်ရေး အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ အစ်ကိုနဲ့ ချိုရီက နေနဲ့လ..လိုပဲ မဆုံနိုင်…။ ညနေက အစ်ကိုပေးသွားသော ရတနာဝင်းထိန် ၏ စာအုပ်လေးကို ချိုရီ အပျင်းပြေ ဖတ်မိသည်..။အချစ်သင်္ဘော …ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေး…ချယ်ရီနံ့ သင်းသော ဂျပန်မလေးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပိတောက်နံ့လှိုင်သော မြန်မာလေးတစ်ဦးတို့၏ အချစ်ကို ကျောရိုးခင်းထားသည်မို့ ရင်မှာနွေးထွေးစွာ လှုပ်ရှားရသည်..။ထိုဂျပန်မလေးကို မြန်မာသင်္ဘောသားလေး အထက်အရာရှိက အဓမ္မ မုဒိမ်းကျင့်သော အခန်းမှာမူ ချိုရီ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ပြီး စောက်ပတ်လေးကို လက်ဝါးနှင့် အုပ်ထားမိသည်အထိ ခံစားရသည်..။ မတော်တရော် ကြီးမားလွန်းသော ကပ္ပတိန်ကြီး၏ လိင်တံကြီးက ဂျပန်လှပျိုဖြူလေး၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဒလကြမ်းထိုးစစ်ဆင် ဝင်ရောက်သွားသောအခါ ဂျပန်မလေး စောက်ဖုတ်မှာ သွေးချင်းချင်း ရဲပြီး မေ့မျောသွားခဲ့ရပုံ…။ချိုရီ ..ခြင်ထောင်ထဲမှ ထွက်ပြီး မီးဖိုချောင်ထဲ လာခဲ့ကာ ပန်းကန်စင်ပေါ်မှ ခရမ်းရှည်သီးကြီးကို ယူပြီး မီးဖိုဘေးတွင် ကားယားလေးထိုင်ပြီး သူမစောက်ပတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ ခရမ်းသီးကြီးကို တဖြေးဖြေး ထည့်ကြည့်သည်..။ လီးကြီးကဲ့သို့ ပူနွေးမနေပဲ အေးစက်နေသော အထိအတွေ့က ချိုရီ့ ကာမစိတ်ကို မနှိုးဆွနိုင်ချေ…။ သို့သော်လည်း လီးမရှိ…ခရမ်းသီးနဲ့ ဖြေ ဆိုသကဲ့သို့ ခရမ်းသီးရှည်ရှည်ကြီးကိုပင် တဖြေးဖြေးဖိသွင်းလိုက် …ထုတ်လိုက်ဖြင့် ငုံ့ကြည့်ရင်း အာသာဖြေနေမိသည့် ချိုရီ….။“သမီး…..““ဟင်………အဖေ..“ချိုရီ ကမန်းကတန်းပင် ခရမ်းသီးကြီး ပစ်ချပြီး ထရပ်သည်..။“ဟိုညက သမီး အဖေ့လီးကြီးပေါ်မှာ လာထိုင်တာ အဖေသိပါတယ်..သမီးရယ်… လာ လာ…ရှက်မနေနဲ့ အိမ်နောက်ဖေးက ဟီးနိုးပျက်ထဲမှာ သွားလိုးရအောင်….“ “ဟင့်အင်း…အဖေ့လီးကြီးက အကြီးကြီး…ဟာကို…““လီးကြီးလဲ…ဝင်ပါတယ် သမီးရဲ့…အဖေလုပ်ပြပါ့မယ်…““နာမှာပေါ့…လို့…““မနာအောင် လုပ်ပေးမှာပေါ့..သမီးရယ်…“ချိုရီတစ်ယောက် အဖေ လက်ဆွဲခေါ်ရာသို့ ဖရိုဖရဲလေး ပါသွားကာ ဟီးနိုးပျက်ကြီးအတွင်း၌ တစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်များချွတ်ပြီး အလိုးခံရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေတော့သည်..။ အဖေကလည်း မဲနက်ရှည်လျားသော သူ့လီးကြီးတရမ်းရမ်းကို အသာနှာနှပ်ထားပြီး ချိုရီ့စောက်ပတ်လေးကို ပထမဆုံး မှုတ်ပေးနေပြန်သည်..။ချိုရီ ခုံတစ်လုံးပေါ်၌ ကားယားလေးထိုင်နေသည်..။ ဖြူဖွေးသန့်စင်သော အသားအရေလေးက လှပ ကြည်လွင်နေသည်..။ နို့လေးနှစ်လုံးက မတ်တောင်ကျစ်လျစ်ပြီး ခပ်တုံတုံလေး ခါရမ်းနေကြသည်..။ လက်နှစ်ဖက်က ခုံစွန်းကို တင်းတင်းကိုင်ထားပြီးအဖေက စောက်ဖုတ်လေးကို တပြတ်ပြတ်ယက်ပေးနေသည်ကို အံလေးကြိပ် မျက်စေ့လေးမှိတ်ကာ…ခေါင်းလေးမော့ရင်း…“ဟင်း…..အင်း..အင်း…အာ…ကျွတ် ကျွတ်..ဟင်း ကောင်းလိုက်တာ..အဖေရယ်…“ဟုငြီးတွားနေရှာသည်..။အဖေက ဘုတ်စုစု စောက်မွှေးလေးများကို ပထမဆုံး သွားကြီးများဖြင့် ကြိတ်ဝါးပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း ဆီးခုံလေးကို လျှာနွေးနွေးဖြင့် ယက်သည်..။ ပါးစပ်ထဲ ပါလာသော စောက်မွှေးတစ်ပင်နှစ်ပင်ကို လက်ဖြင့် ယူထုတ်လွှင့်ပစ်ရသေးသည်..။ပြူးဟနေသော စောက်ဖုတ်လေး အထက်မှာ မာတောင်ပြီး ညှီစို့စို့ အပျိုစောက်ပတ်နံ့လေးက င်နှာခေါင်းဝကို စူးရှရှလေး ဝင်ရောက်လာသည်..။ စောက်စိလေးကို နှုတ်ခမ်းကြီးနှစ်ခုဖြင့် ညှပ်ဆွဲရင်း စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ လျှာစောင်းကြီး ထိုးသွင်းပေးလိုက်သည်..။“ပြွတ်..ပြွတ်….ပလပ်…အိ..ဟီး..အမလး…အဖေ…“နို့လေးနှစ်လုံး ခါရမ်းနေအောင် ချိုရီ တွန့်လိမ်နေမိသည်..။ တစ်ခါတစ်ရံလဲ အဖေ့ ဆံပင်များကို ဆွဲယူပြီး အဖေ့မျက်နှာနှင့် စောက်ဖုတ်လေးကို အတင်းကြီး ဖိကပ်ပွတ်ပစ်လိုက်မိသည်..။ အဖေ့နှာခေါင်းမှ မှုတ်ထုတ်လိုက်သော လေများသည် ပေါင်တန်လေးနှစ်ခုလုံးနှင့်စောက်ပတ်လေးကို ပါ နွေးခနဲ နွေးခနဲ ခံစားနေရစေပြန်ပါသည်..။ချိုရီ ..နို့လေးများကို ဆုပ်နယ်နေမိသည်..။ အဖေ့လျှာစောင်းကြီးက စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိရောက်စွာ တိုးဝင်သွားသောအခါ…ချိုရီ ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကောင်းပြီး…စောက်ရေများ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်သည်..။ “ကတော့အဖေ…..အရေတွေ ထွက်ကုန်ပြီ…အဟင့်….“အဖေက ဘာမှမပြော ထွက်ကျလာသော သုတ်ရေပြစ်ချွဲချွဲများကို သူ့လျှာကြီးဖြင့် သိမ်းယူကာ ဂွပ်ခနဲ မြိုချလိုက်သည်..။ ချိုရီ မျက်နှာလေး ရှုံ့သွားသည်..။ အဖေ့ကိုလည်း အားနာသလိုလိုကြီး ဖြစ်သွားမိသည်..။“ဟာ…အဖေကလည်း ရွံစရာ……““သမီးကို ချစ်တာကိုး..ကွဲ့….““ဟွန်း…သမီး သမီးနဲ့….ဟင်း….အဖေနော်..အမေနဲ့ ပြန်ပြောမှာပဲ…သိလား….“ “ခရမ်းသီးထက်စာရင် အဖေ့လီးက အရသာပိုရှိတယ်လို့ ပြောမှာလား…သမီး…““သွားပါ…သူ့ဟာကြီးကဖြင့် ခရမ်းသီးထက်တောင် ကြီးသေး…“အဖေက ချိုရီ့ ပေါင်ကြား၌ ရပ်လိုက်သည်..။ မိုးပေါ်ထိုးတက်တော့မယောက် မတ်ထောင်နေသော လီးကြီးက အဖျားငိုက်သွားပြီး…ဒစ်ပြဲကြီးက ချိုရီ့ ပါးစပ်ဝ၌ တ့ကပ်လာသည်..။ “ဟင့်အင်း…သမီး ရွံတယ်….““ဖေဖေ…ဆပ်ပြာနဲ့ တိုက်ထားပါတယ်..သမီးရဲ့ စုပ်ကြည့်အုံး…“ဟုတ်သည်…၊ အဖေ့လီးကြီးက ဆပ်ပြာမွှေးနံ့ သင်းနေသည်..။ ထို့ကြောင့်လဲ ချိုရီ စုံကိုင်ဖြဲချပြီးပြီဆိုမှ လျှာနီနီလေး ထိပ်ဖျားဖြင့် ကလိလိုက်ကာ..ဒစ်တဝိုက်ကို လျှောက်ယက်ပစ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့မှ လီးကြီးကို ပါးစပ်လေး အစွမ်းကုန် ဟပြီး ငုံခဲကာ စုပ်သွင်းလိုက်သည်..။ “အမလေးလေး….ကောင်းလိုက်တာ သမီးရယ်….“အဖေ့ တင်ပါးကြီးများ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်ရင်းပြောသည်..။ပါးစပ်ထဲရှိ ဒစ်ကြီးကို ချိုရီက လျှာလေးဖြင့်မနားတမ်း ယက်ပေး ကလိပေးရင်း ရှေ့နောက် လှုပ်ရှားပေကာ တံတွေးမျာ စိုစွတ်ကုန်သည်အထိ စုပ်ပေးလိုက်သည်..။အဖေက အရှိန်တက်လာပြီး ချိုရီ နောက်စေ့လေးကို ချုပ်ကိုင်ကာ ပါးစပ်ထဲသို့ ဆောင့်လိုးချလိုက်သည်..။ ချိုရီမှာ အသက်ရှူများ မှားတော့မလိုဖြစ်သွားရသည်..။ ပြီးမှ အဖေက လီးကြီးကို ချိုရီ့ပါးစပ်မှ ပြွတ်ခနဲ ဆွဲချွတ်ပြီး သုတ်ရေများကို နို့လေးနှစ်လုံးပေါ်သို့ ဖောက်ခနဲ ဖောက်ခနဲ ပန်းချပစ်လိုက်သည်..။ ပူနွေးသော သုတ်ရေများက ချိုရီ့ နို့တွေပေါ်တွင် ပူခနဲ ပူခနဲ ကျရောက်လာလေရာ ချိုရီက မြတ်နိုးနှစ်သက်စွာဖြင့် ပွတ်သပ်လိမ်းကျံနေမိပြန်သည်..။တသင်းသင်းလှိုင်နေသော သုတ်ရည်ရနံ့များက သူတို့နှစ်ဦးကို လွှမ်းခြုံထားလေသည်..။ “သမီး…ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အဖေ့ပုခုံးပေါ်တင်…..“အဖေက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်ရာ ချိုရီ၏ လုံးတစ်တင်းမာနေသော စောက်ဖုတ်လေးနှင့် မဟူရာရောင်လီးကြီးတို့မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိနေကြပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေကြပေသည်..။ချိုရီက ခုံပေါ်တွင် ပက်လက်ကလေးဖြစ်သွားရသည်..။ ခြေနှစ်ချောင်းက ခုံအောက်မှ မတ်တတ်ရပ်နေသော အဖေ ပုခုံးပေါ်ရောက်နေရာ လီးနှင့် စောက်ပတ်တို့မှာ တစ်လက်မပင် မကွာတော့ပေ…။ အဖေက သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ချိုရီ့ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်း အထက်အောက် ပွတ်သပ်ဆွဲချပေးပြီး အရေများ စိုရွှဲသွားမှ… “လိုးမယ်နော်…သမီး….““အင်း….အင်း…….“ချိုရီ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ပူးကပ်ပြီး ပါးစပ်အတွင်းသို့စုသွင်းကာ အင်း အင်း ဟုပြောရင်း ဝင်လာမည့်လီးကြီးကို အသင့်စောင့်ကြိုရန် မျက်စေ့မှိတ်ထားမိသည်..။ ဒစ်ပြုတ်ကြီးက စောက်ပတ်လေးအောက်ဖက်နားမှ ကော်ဝင်သွားလေပြီ…။ “ပြွတ်……““အေ့……အမေ့…..“ချိုရီ အသံလေးနဲနဲ ကျယ်သွားသည်ထင်၏..။ လန့်ပြီး အော်လိုက်မိသည်..။“ဗြစ်…ထစ်..ထစ်…ဗြစ်…..““အားရိုးရိုး…..ကြပ်လိုက်တာ အဖေရယ်….““အစမို့ပါ သမီးရဲ့….ခဏလေး….ပါ…““ဗြစ်….ဗြစ်…ဖလွတ်…..““အား…….ကွဲပြီ….အဖေ….“ချိုရီ ကုန်းထရင်း အော်သည်..။ “ဗြစ်….ဒုတ်……““အမလေး…..သေပါပြီ….အဖေရေ…..“ချိုရီကုန်းထလိုက်မှ လီးကြီးက ပိုဝင်သွားပြီး အပျိုမှေးလေးကို ထိုးဖောက် ဖြိုခွဲပစ်လိုက်ရာ သွေးမျာ ဒလဟော ကျဆင်းလာလေတော့သည်..။စောက်ပတ်အောက်နှုတ်ခမ်းလေးမှာလဲ စပါးလုံးနှစ်ထောက်စာခန့် ကွဲသွားပြီး..စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်သွားလေသည်..။ ထိုစဉ်တိုင် လီးကြီးက တဝက်မကျိုးသေး…။ “တော်ပြီ….တော်ပြီ…ပြန်ချွတ်တော့…လီးကို အခုပြန်ချွတ်ပေး…..ဟင့် ဟင့်……..“ချိုရီ နာကျင်လွန်း၍ ကြိတ်ပြီးအော်သည်..။ မျက်ရေများလည်း ကျဆင်းလာသည်..။ မျက်နှာလေးက ငိုမဲ့မဲ့ သနားစဖွယ်လေးပင်…။အဟီး…..ဟီး..နာတယ် အဖေရဲ့…နာတယ်…သမီး မခံနိုင်တော့ဘူး…..အဟူး…ဟူး…..အီး…အ….ဟင့်….ဟင့်..“ခလေးလေးပမာ ချိုရီ ငိုပါလေပြီ…။ အဖေကလည်း အရှိန်တက်နေပြီဖြစ်ရာ သွေးစလေးများ ပေကျံနေသော ချိုရီ့စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ ကျန်လီးကြီး တဝက်ကို ဖိသွင်းချလိုက်လေတော့သည်..။
ဟင့်….အွန့်….“ချိုရီ ပါးစပ်လေးဖောင်းသွားပြီး အသက်အောင့်ထားသည်..။ ဗိုက်ထဲသို့တိုင် ဝင်သွားပြီလားဟု ထင်မှားစရာ ရှည်လျားလွန်းလှသည့်လီး……။လီးကြီးက အဆုံးဝင်သွားမှ ငြိမ်သက်သွားသည်..။ ချိုရီ အသက်မှန်အောင် ရှူနေရရှာသည်..။ အဖေက စောက်ခေါင်းထဲတွင် တစိမ့်စိမ့် တရွရွလေး လှုပ်ရှားနေသော စောက်ပတ်အတွင်းသားများ၏ ကလူကျီစယ် ပွတ်သပ်မှုကို ငြိမ်ပြီး ခံစားရင်း ချိုရီ့ ဟင်းရေသောက်ပန်ကန်လုံးနီးပါးမျှ နို့အုံကျစ်ကျစ်တွေကို လုံးခြေ ပွတ်သပ်ကာ နို့သီးခေါင်းလေးများကို ခြေပေးနေလိုက်သည်..။
“အင်း….ဟင်း ဟင်း….ကျွတ် ကျွတ်….အား..ဟား…“ချိုရီ ဖင်လေးကို လူးလွန့်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများဖြင့် ဖြစ်ညှစ်ကာ ခါးလေးကော့ကော့ပေးလိုက်လေသည်..။ ဖိကပ်ထားလျက်သား ဆတ်..ပြီးဆောင့်လိုက်သော အရသာကား ခံကောင်းလွန်းလှပါကလား…။ချိုရီ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးများကို ကိုင်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ကော့ဆောင့်ပစ်လိုက်ကာ အီဆိမ့်ချိုအေးသော ကာမအရသာကို အပြည့်အဝကြီး ခံစားလိုက်ရလေတော့သည်..။
“ထွက်…..ထွက်ကုန်ပြီ….အဖေ့…..ဟင့် ဟင့်…..“ချိုရီ နောက်တစ်ချီ ပြီးပြန်လေပြီ…။အဖေက သူ့လီးကြီးကို ငုတ်ကြီးဆွဲထုတ်သလို ဖြေးဖြေးချင်း ရှည်လျားစွာ တအိအိ ဆွဲထုတ်ပြီးမှ ချိုရီအား လေးဘက်ကုန်းစေပြန်သည်..။“ဟင်…..အ..အဖေ….ဖင်ကို လိုးမလို့လား…..““မဟုတ်ပါဘူး သမီးရဲ့….စောက်ဖုတ်လေးကိုပဲ လိုးမှာပါ….““ဟာ….ဝင်ပါ့မလား…အဖေရဲ့ ..နောက်ပြန်ကြီး…..““သမီး ခါးခွက်ထား….အေး.တင်ပါးလေး ဖြဲကားထား…..“ပြူးထွက်လာသော စောက်ပတ်လေးက အဝေးမှ လမ်းမီးရောင်ဖြင့် တဖိတ်ဖိတ် လှပလို့နေသည်..။ လိုးရက်စရာ မရှိအောင် လှပသော သမီးလေး ချိုရီအား ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် လိုးပြန်ပါတော့သည်…။
“ပြွတ်…ပြွတ်….ဗြစ်…..ဗြစ်…………““အင့်..အင့်….အသံတွေကလဲ ကျယ်လိုက်တာ အဖေရာ…..ရှက်စရာကြီး……““အရေတွေ ထွက်ကုန်လို့ပါ….သမီး ရဲ့………..““အိ…အီး ကောင်းလိုက်တာနော်…..ဟင်း…ဟင်း….ကျွတ်….““ပြွတ် ပြွတ်…..ပြစ် …ပြစ်…..အင့် အင့်…..အ…..အ………“ဖင်လေးကို လမွှေးအုံကြီးက ဖိကပ်ပွတ်တိုက်ရင်း ဂွေးဥကြီးကပါ ချိုရီ့ စောက်ဖုတ် အထက်ပိုင်းကို အောက်မှ လွှဲရိုက်နေသည်မို့ ချိုရီ မခံစားဖူးသော အလိုးခံခြင်းအရသာကို ခံစားနေရသည်..။
“အိ….အား…ဖြေးဖြေး…..ဆောင့်ပါ…ရှင်….ကျွတ်….ကျွတ်…..““ပြွတ်…ပြစ်….ပြစ်….ဖတ် ….ဖတ်….ပြွတ်………““အိ…အီး…..ကောင်းလာပြန်ပြီအဖေ…..အိုး…ဒုက္ခပဲ ထွက်အုန်းမယ်….“ချိုရီက စိတ်မရှည်သလိုပြောရင်း နောက်သို့ ပြန်ပြီး တွန်းတွန်းပြီး ဆောင့်ဆောင့်နေလိုက်ရာ အဖေလီးအြဖေကီးမှာလဲ သံချောင်း သံတုတ်ကြီးပမာ ပို၍ ပို၍ တင်းပြောင် မာကျောသွားပြီး ချိုရီလေး၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သုတ်ရေများ ပန်းထည့်လိုက်လေသည်..။ ချိုရီကလဲ စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရေလေးများ ဒလဟော လွှတ်ချလိုက်လေရာ လီးနှင့် စောက်ပတ်တို့ သာမက ဖင်များ ဆီးခုံများပါ ပေကျံကုန်လေသည်..။
“အား..ဟား……ကောင်းလိုက်တာ သမီးလေးရယ်….“အဖေက လီးကြီးကို မချွတ်ပဲ ချိုရီ့ ကျောပြင်လေးကို ကုန်းနမ်းရင်း တွဲလဲလေးကျနေသော နို့တွေကို အောက်မှ လျှိုပြီး နှိုက်ကာ သုံးလေးချက်မျှ ဖိကပ်ဆောင့်ချလိုက်ရာ တင်ပါးဖြူဖြူလေးများ ကျောက်ကျောတုံးလေးများပမာ တုံခနဲ တုံခနဲ ခါရမ်းသွားလေသည်..။ ချိုရီလဲ နုံးချိပျော့ခွေပြီး မှေးနေလေသည်..။ လီးကြီးကို မချွတ်ပဲ စိမ်ထားရင်း အဖေက တိုးတိုးပြော၏…။
“ပုဇွန်ထုပ်ကွေးကလေး လိုးရအောင် သမီး….““ဟာ…အဖေကလဲ မတော်သေးဘူးလား လို့…““တစ်ပေါင်ကျော်တို့….စကောဝိုင်းတို့….ဇရက်ညှောင့်တို့…သမီးကို သင်ပေအုံးမယ်လေ…““မနက် ဆိုင်ဖွင့် နောက်ကျနေအုံးမယ်.. ပြီးတော့ အမေနိုးလာရင် ဒုက္ခ…..““အဖေ ..ဆေးတိုက်ထားပါတယ်….သမီးအမေ မနိုးပါဘူး…. ဘယ်နှယ့်လဲ..အဖေလိုးပေးတာ ကောင်းရဲ့လား…သမီး…““အို….ဘာတွေမေးနေတာလဲ….မသိဘူး….““ဟဲဟဲ…သမီးက ရှက်နေတုန်းပဲကိုး…..“အဖေမျက်နှာလေး ဆွဲလှည့်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို တအားစုပ်ယူလိုက်ရင်း လီးကြီးကို ဖိဆောင့်ချလိုက်ရာ ချိုရီလေးခမျာ ဟင်းခနဲ မြည်ပြီး မျက်တောင်လေးများ မှေးကျသွားရရှာလေတော့သည်…။
——————×———————-×————————–စိန်သောင်း…ဒီကားပျက်နားရောက်နေတာ ကြာပြီဖြစ်၏..။ အရက်ရောင်းသော ချိုရီဆိုသော ကောင်မလေးနှင့် သူ့အဖေတို့ ဟီးနိုးကားပျက်ကြီးအတွင်း လိုးပွဲကြီး ကျင်းပနေသည်ကိုလဲ စိန်သောင်း အစအဆုံးမြင်ရသည်.။ သည်မျှ ချောမောလှပသည့် ချိုရီအား ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဖြုတ်နေခြင်းမှာ စိန်သောင်းနှမြောတသမိသည်..။ မိမိချစ်ရေးဆိုစဉ်က “ချိုရီ ငယ်ပါသေးတယ် “ တဲ့ ..။ ခုတော့ တစ်ပေကျော်မျှ လီးကိုတော့ ချိုရီ ခံနိုင်နေပါပကော..။ တွေ့ကြအုံးမှာပေါ့ ချိုရီ…ရယ်…။
“ဟယ်….ချိုရီ…ဝလာသလိုပဲ ဟယ်…““ကြည့်စမ်း…နွဲ့ဆိုး နင်ဘယ်ကလှည့်လာတာလဲ..““သက်သက်ပါ…ဘဲဘဲနဲ့ ရုပ်ရှင်လာကြည့်ပြီး ဝင်လာတာ…““..လား….နင့်ဘဲ ရော ခေါ်လိုက်လေ…““မောင်….လာလေ…ဒါ နွဲ့ဆိုး သူငယ်ချင်း ..ချိုရီ တဲ့…“သားနားသပ်ယပ်သော မြန်မာဆန်ဆန် ရှပ်ဖြူ ကချင်လုံချည် ဝတ်ထားသော အသက် ၃၀ ခန့် အသားဖြူဖြူ လူရွယ်က အိနြေ္ဒရစွာ အိမ်ပေါ်တက်ထိုင်သည်..။ “နင်…စာမေးပွဲ ဖြေသေးလား ဟင်….“နွဲ့ဆိုးက သင်ဖြူးဖျာပေါ် ထိုင်ရင်းက မေးသည်..။“ဘယ် ဖြေနိုင်မှာလဲ ဟာ… ခုလည်း အမေ့ကို ဆေးရုံတင်ထားရတာ တစ်ပတ်ရှိနေပြီ ဟ…““ဘာရောဂါလဲ ဟင်…“လူရွယ်က ဂရုဏာသက်စွာ မေးသည်..။ “ပန်းနာပါ အစ်ကိုရယ်..တစ်နှစ်ကျော်နေပြီ…““အော်….ညီအစ်ကို မောင်နှမလဲ မရှိဘူးနော်..““ဟင့်အင်း…ချိုရီက တစ်ကောင်ကြွက်ပါ…အစ်ကို…“နွဲ့ဆိုးက လူရွယ်မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်သည်..။“ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပါနဲ့ နော်….၊ နွဲ့ဆိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်ကိုလဲ ခင်ပါ…..အခု ..ချိုရီ ဈေးရောင်းဖို့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ကူညီပါရစေ..ကဲ နွဲ့ဆိုးရေ..ကိုယ်တို့စုထားတဲ့ အထဲက ငွေသုံးရာလောက် လှူလိုက်ပါကွာ…““ဟုတ်ကဲ့ မောင်…ကျေးဇူးပါပဲ..နွဲ့ဆိုးကလဲ ချိုရီ့ကို ကူညီချင်နေတာပါ…“ ချိုရီ အံ့သြ ဝမ်းသာ မျက်ရည်ဝဲနေမိသည်..။ ကိုးဆယ်တန် သုံးရွက် ၊ ဆယ်တန် သုံးရွက် က ချိုရီ့ လက်ထဲသို့ ရောက်လာသည်..။“အမေ့ကို ထမင်းသွားပို့တယ် လေ…““ဒါဆို..ခဏ…““ဘာလဲဟင်….“ချိုရီက နွဲ့ဆိုးအနား တိုးပြီး မေးသည်..။
“ကိုယ်တို့ အခန်းထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောချင်လို့…““အမလေး..ဘာများလဲလို့….ကောင်မနော်…ဟင်း..“တကယ်တော့ နွဲ့ဆိုးဆိုသည်မှာ ချိုရီတို့က တမင်ခေါ်သော နာမည်သာ ဖြစ်သည်..။ နွယ်နွယ်စိုး အမည်ကို ဖျက်ပြီး နွဲ့ဆိုးဟု သူငယ်ချင်းများက ခေါ်ခဲ့ရာမှ နှုတ်ကျိုးနေကြသည်..။
“လာ…မောင်…“ဟု နွဲ့ဆိုးက သူ့မောင်ကို လက်ဆွဲပြီး အတွင်းခန်းထဲ ဝင်သွားကြသည်..။ ကျောင်းမှာကထဲက နွဲ့ဆိုးက ရဲတင်းသွက်လက်သည်..။ ဆိုင်မှာ လူပါးနေချိန်မို့ အမြည်းများ ကြော်လှော်ရန် ချိုရီ မီးဖိုထဲ ဝင်ရန် အလာ မျက်စိက အခန်းထဲ ရောက်သွားသည်..။ နွဲ့ဆိုးက အပေါ်အင်္ကျီများ မရှိတော့..။ ဖြူဝင်းသော အသားလေးများဖြင့် နို့လေးများက ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေသည်..။ စွင့်ကားသော တင်ပါးကြီးများမှာလဲ ထမီက လျောကျနေ၍ လွတ်လပ်စွာ ပေါ်နေသည်..။ မောင်က အောက်မှ ပက်လက်အနေအထား..၊ မောင့်ပုဆိုးက ခါးသို့ လိပ်တက်နေ၍ ကြီးမားနီရဲသော ဒစ်ပြဲပြဲကြီးက နွဲ့ဆိုးဖင်ကြီးဘေးမှ ကပ်လျက်သားကြီး ထောင်နေသည်..။
မောင့်လက်များက နွဲ့ဆိုး နို့လေးများကို ပွတ်သပ်နေသည်..။ နှစ်ယောက်လုံး ချိုရီ့ ကို သတိမထားမိကြ..။ နွဲ့ဆိုးက မောင့်လီးကြီးကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ဖင်လေးကြွကာ သူမစောက်ပတ်လေးထဲသို့ တေ့သွင်းကာ ထိုင်ချလိုက်သည်..။“ဗြစ်…ဗြစ်…ပြွတ်………““အ….အား…….ရှီး…..ကျင်သွားတာပဲ…သူ့ဟာကြီးက သံချောင်းကြီး ကျနေတာပဲ…ဟွန်း…..“နွဲ့ဆိုးက မောင့်နဖူးကို လက်သီးဆုပ်လေးဖြင့် လှမ်းထုကာ ရယ်သည်…။
မောင်က ကျေနပ်စွာ ပြုံးရင်း….“နွဲ့ဆိုး ဟာလေးကလဲ ကျဉ်းတာကိုး….““အံမယ်…ဒါဆို အစက အပေါက်ကျယ်တာ ရှာပါလား…လို့…“သူတို့ပြောနေသော စကားများကို နွဲ့ဆိုး သဘောကျစွာ တခစ်ခစ် ပြန်ရယ်ရင်း…. မောင့်အပေါ်မှ တက်လိုးပေးနေသည်..။ချိုရီထရံဘေးသို့ ကပ်ကြည့်ရင်း အာခေါင်တွေ ခြောက်လာသည်..။ ရင်ထဲ၌လဲ မောလှိုက်ကာ ခံချင်စိတ်များ ထန်ပြင်းလာနေသည်..။
“နွဲ့ဆိုး…..“မောင်က တိုးတိုးခေါ်သည်..။“ဟင်း……အ..အား……ဘာလဲ…အရေးထဲ….“ချိုရီထံ ကျောပေးထားသော နွဲ့ဆိုး တင်ပါးကြီးများက မောင့် ပေါင်နှစ်လုံးပေါ်၌ ဖိထိုင်ချလိုက်တိုင်း ပြားပြားသွားသည်..။“နွဲ့ဆိုး သူငယ်ချင်းလေးက အရမ်းတောင့်တယ် နော်….““ချိုရီ လား… ဘာလဲ မောင် ဖြုတ်ချင်လို့လား….“ ချိုရီ့ရင်ထဲ ဒိန်းခနဲ ဖြစ်သွားသည်..။ နွဲ့ဆိုး ဒီကောင်မ ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေပါလိမ့်နော်……။
“နွဲ့ဆိုး ခွင့်ပေးရင်ပေါ့….““စည်းရုံးလို့ ရမရတော့ မသိဘူးနော်…အရိုင်းပဲ….““အဲဒီ အရိုင်းမျိုးပဲ နှိပ်ချင်တာ…..နွဲ့ဆိုးလို ပက်ကင်ဖောက်ပြီးသား မဟုတ်ဖူး ပေါ့….““ဟင်း…စကားထဲက ဇာတိမပြနဲ့ နော်….အ…အား…..ကျွတ် ကျွတ်….မောင့်ဟာကကွာ…တစ်ချက် တစ်ချက် ဘာသွားသွား ထိလဲ မသိဘူး…ကျင် ကျင်သွားတာပဲ…“
နွဲ့ဆိုးက မျက်နှာလေး တမင်အိုပြီး ခပ်လေးလေး ပြောသည်..။“သားအိမ်ဝ သွားထိလားမှ မသိတာ….ဖြေးဖြေးဆောင့် ပေါ့…““တော်ပြီ..ညောင်းတယ်ကွာ….မောင်လုပ်တော့….““ပုဇွန်ထုပ်ကွေး လုပ်ရအောင်နော်…..““သူ…တော်တော် အတတ်ဆန်းချင်တယ်…. အဲဒါက အဆုံးလဲ မဝင်ပဲနဲ့….““ဝင်အောင် လုပ်ရင် ဝင်ပါတယ်…နွဲ့ဆိုးရယ်….ကဲ အိပ်….“နွဲ့ဆိုးက ချိုရီရှိရာဘက်သို့ မျက်နှာမူပြီး ဒူးလေးနှစ်ဖက်ကို ရင်ခွင်အထိ ဆွဲကပ်ကာ တစောင်းလေး အိပ်ပေးသည်..။ မောင်က နွဲ့ဆိုးနောက်မှ ကျောဘေးနားကပ်ပြီး အိပ်သည်..။ ကွေးထားသော နွဲ့ဆိုးပေါင်တံလေး နှစ်လုံးကြားမှ တင်းမာပြောင်လက်နေသော ပန်းနုရောင် စောက်ဖုတ်လေးက ပြူးပြီး ထွက်နေသည်..။
မောင့်ဒစ်ပြဲကြီးက စောက်ဖုတ်အကွဲလေးကို ဒရွတ်တိုက် ပွတ်ဆွဲနေရာ နွဲ့ဆိုး စောက်ဖုတ်လေး ဟစိဟစိဖြင့် ခံချင်နေကြောင်း ချိုရီ တွေ့နေရသည်..။မဲနက်ကောက်ကွေးသော မောင့်လီးမွှေးများက နွဲ့ဆိုးဖင်လေးကို ကြိပ်ကြိပ်ပြီး ဖိပွတ်နေရာ နွဲ့ဆိုး တင်ပါးလေးကို နောက်သို့ ထိုးထိုး ကော့ပစ်နေရှာသည်..။“လုပ်တော့ ကွာ…. မောင်ကလဲ ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး…..“
“ခံချင်လာပြီလား….ဟင်….““အင်း ပေါ့…လို့ တစ်ခါထဲ ..လိုးမဲ့ အရေး…..“နွဲ့ဆိုးက မျက်နှာလေး လိမ်လှည့်ပြီး ပြန်ပြောသည်..။ မောင်က သူ့လီးဒစ်ပြုတ်ကြီးကို ကိုင်ပြီး နွဲ့ဆိုးစောက်ပတ်အဝသို့ တေ့ပြီးမှ ကော်၍ လိုးသွင်းလိုက်သည်..။
“အင်း..အင်း…အားလားလား…ကျွတ် ကျွတ်………..“နွဲ့ဆိုး မျက်တောင်ကော့ကြီးများ မှေးစင်းကျသွားပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်မွှာကို စေ့ကပ်ပြီး အံလေးကြိပ်၍ ရှုံ့မဲ့ပြီး ငြီးသည်…။ ချိုရီကပါ ယောက်ရမ်းပြီး မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့သွားကာ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဝါးလေးနှင့် အုပ်လိုက်မိသည်..။ မောင့်လီးတုတ်တုတ်ကြီးက နွဲ့ဆိုးစောက်ပတ်လေးထဲသို့ ပြည့်ကြပ်ပြွတ်သိပ်စွာ ဝင်နေရာ စောက်ပတ်လေးမှာ ပင်ကိုယ်ပုံစံ ရှည်ရှည်လေး မဟုတ်တော့ပဲ.. ဝလုံးလေးသဏ္ဍာန် ဝိုင်းစက်ပြည့်တင်းသွားပြီး စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများပါ ပျောက်ကွယ်ပြီး လုံးဝ အသားပေါက်ကလေးသာ ဖြစ်နေတော့သည်..။
ချိုရီ ရပ်ပြီး ချောင်းနေရာမှာ ဂွင်ကျသော မြင်ကွင်းဖြစ်နေသဖြင့် လီးအဝင်အထွက် စောက်ပတ်လေး၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ပြတ်သားစွာ မြင်နေရသည်..။ နွဲ့ဆိုး စအိုပေါက်လေးမှာ တခါတရံ လီးကြီး ကျွတ်ထွက်ပြီး ချော် ချော်ထိုးမိလေတိုင်း ရဲခနဲ ရဲခနဲ ဖင်လေး ပြဲ ပြဲ သွားသည်ကို မြင်နေရလေသည်..။ပွတ်…ပြွတ်…..ပြစ်….ပလစ်…..ပြွတ်……….“လီးကြီးက မှန်မှန် ဝင်ထွက်နေရာမှ တခါတလေ သွက်သွက်ခါသွားအောင် ပစ်ဆောင့်လိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်..။
“အ…..အား……….ဖြေးဖြေး…မောင်ရယ်….နာတယ်ကွာ…..အဟင့်….ဟင့်……““ပေါင်ဖြဲထားပေးလေ…နွဲ့ဆိုးရဲ့…တော်ကြာ အရမ်းစိထားတော့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသာလေးတွေ ပွန်းကုန်မှာ….““အင်း….အင်း….အဟင့်…သူသိပ်ကြမ်းတာပဲ ကွယ်….““နွဲ့ဆိုးကော မကောင်းဘူးလား..ဟင်…““ဟင့်အင်း….ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လေးပဲ….အရသာရှိတာ…သိရဲ့လား….“သူတို့နှစ်ဦး လေသံမှာ ကြိတ်ပြီး တွတ်ထိုးနေကြသော်လည်း ချိုရီ ရှင်းလင်းပီသစွာ ကြားနေရသည်..။ စောက်ရေများ စိုစိုစိစိလေးဖြင့် စောက်စိလေးမှာ ခပ်ညိုညို..၊ လီးကြီးအပြင်ထွက်လာတိုင်း အတွင်းပိုင် နှုတ်ခမ်းသားလေးများက ဒစ်ပြဲကြီးဖြင့် ချိတ်ချိတ်ပြီး ရဲခနဲ ရဲခနဲ ပြဲပြဲသွားသည်မှာ ကြည့်နေသော ချိုရီပင် အရသာ တွေ့ချင်နေသလိုလို ရှိလေသည်..။
“အိုး….အ…အင့်……အင်း………..ထွက်ကုန်ပြီ မောင်…..“နွဲ့ဆိုး ဒေါသတကြီး ဟန်လေးဖြင့် မောင့်ခါးကို လက်ပြန်ကိုင်ပြီး ဖင်ကြီး ပြားပြားသွားအောင် နောက်သို့ ဖိဆောင့်လိုက်လေသည်…။“အားရပါးရ ဆောင့်စမ်းပါ မောင်ရယ်……ရှီး….ကျွတ်…ကျွတ်….“မောင် ရုတ်တရက် ဒူးထောက်လိုက်ပြီး တပေါင်ကျော် အနေအထား ယူပြီး တအားကြုံးလိုးတော့သည်..။
“အား……အား…………..အား………………..“ကောင်မ…နွဲ့ဆိုး..တအားအော်ပစ်လိုက်သံက ချိုရီပင် လန့်သွားရသည်..။ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည်..။ မောင့်လီးတုတ်တုတ်ကြီးက အဆုံးထိတိုင် နစ်နစ် ဝင်သွားရုံမျှမက ဂွေးဥအတွဲကြီးပါ ကျွံဝင်သွားတော့မလောက် မောင့်လိုးအားက ပြင်းထန်လွန်းလှသည်..။ ချိုရီတို့ အိမ်လေးမှာ သတိထားကြည့်ပါက ငလျင်လှုပ်နေသကဲ့သို့ သွက်သွက်ခါနေသည်..။ ထရံတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ဓါတ်ပုံများက တဂျောက်ဂျောက် လှုပ်ရှားနေသည်..။ အမေ့ကုတင်ကို ကာရံထားသော ပုဆိုးဟောင်း ကုလားကာလေးမှာ လှိုင်းတွန့်လေးများ ထပြီး လှုပ်ရှားနေသည်..။ ပေါင်တစ်ချောင်းက မောင့်ပုခုံးပေါ်တွင် ရောက်နေသည်..။
နွဲ့ဆိုးပေါင်နှစ်ချောင်းမှာ အပြဲဆုံး အကားဆုံးအနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေလေရာ လီးကြီးမှာ အရင်းခိုက်သည်အထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ဝင်နေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်..။“အား…အား……..အင့်….အား အား………“တံတွေးမြိုချလိုက် အော်လိုက်နှင့် ကြိတ်ပြီး ထွက်နေသော နွဲ့ဆိုးအသံက ပို၍ ဆက်ဆက်လာတော့ သည်…။ “အား…အာ…..အား…အာ…..အ………“ဆောင့်လိုးနေပုံကိုလဲ ကြည့်အုံး…အော်တိုစက်သေနပ်ပစ်နေသလား ထင်ရသည်..။ လီးကြီးကို အစွမ်းကုန် လိုးထည့်နေခြင်းမို့ နွဲ့ဆိုး အော်နေရပြီ…။ ခဏမျှ ဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီး နွဲ့ဆိုး နို့လေးနှစ်လုံးကို တအားကြီး ကုန်းဖိနမ်းရင်း မောင့်ဖင်ကြီးမှာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြင့် တဖြေးဖြေး ငြိမ်သက်သွားတော့သည်..။ နွဲ့ဆိုးလက်ဖြူဖြူလေးများက မောင့်ကျောမှ ဖုံမှုံများကို ခါချပေးသလို ခါနေရင်း ခလေးတစ်ယောက်ကို ပုတ်သိပ်နေသကဲ့သို့ ဖွဖွလေး ပုတ်ပေးနေတော့သည်..။
အဖေ ..ခုတလော အတော်အတင့်ရဲနေသည်.. .။ အမေကလည်း ဆေးရုံမှာ ဆိုတော့ ထင်တိုင်းလုပ်နေသည်..။ ခုလဲ…နေ့လည်ခင်းကြီး ..ချိုရီ့ အိပ်ခန်းထဲ ဝင်လာပြန်သည်..။“အို…အဖေကလဲ….အိမ်ရှေ့မှာ…ဆိုင်ခဏ ထိုင်ပါဆို…““လူမလာလို့…သမီးရဲ့ …နော်…တစ်ချီလေးထဲ….““ဟင့်အင်း….ဟင့်အင်း….ညကလဲ သုံးခါတောင်….တော်ပြီ….““ခဏလေးပဲ..သမီးရယ်.နော်..လိမ္မာပါတယ်…..“
“သွားစမ်းပါ….ဒီမှာဖြင့် စောက်ခေါင်းထဲ ကျိန်းစပ်နေပြီ…“ချိုရီက အဖေ့ ရင်ဘတ်ကြီးကို တွန်းပြီး စောင်းအိပ်သည်..။ အဖေက ပုဇွန်ထုပ်ကွေးပုံစံလုပ်ရန် ချိုရီ့ဘေးမှ ကပ်အိပ်ပြီး ထမီလေးကို အောက်စမှ ဆွဲလှန်လိုက်သည်…။“ဟာ…..ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး….စိတ်ညစ်ပါတယ်.. ထ..ထနိုင်လွန်းတယ်..၊ ဒါကြောင့် အမေ နလံမထူတာ…နေ့ရောညရော လုပ်နေတာပဲ မှုတ်လား……..“
“နင့်အမေက နင့်လိုမဟုတ်ဘူး…သူကစ ..စလိုးတာဗျ.. …““အမေ့ကို မညှာမတာ ဆောင့်တာပဲ..မှုတ်လား…““ရောဂါထရင် မလုပ်ပါဘူး….သမီးရယ်….နင့်အမေက သိပ်ပြီး အပေးကောင်းတာ…တော်ရုံများ…သူ့ဖင်နှစ်ချက်လောက် စကောဝိုင်းပြီး မွှေလိုက်တာနဲ့ အဖေ ပြီးသွားရော…“စကားတပြောပြောနဲ့ ချိုရီ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ညှိုးကြီးထိုးထည့်ပြီး တပြစ်ပြစ်မြည်အောင် လှည့်မွှေနေစဉ်.. …
“ချိုရီ….ဟေ့..ချိုရီ အရက်တစ်လုံး….“အစ်ကို့အသံကို ချိုရီ…ကောင်းစွာ မှတ်မိသည်မို့ ထမီလေးကို ဆွဲချဖုံးရင်း အခန်းအပြင်သို့ ပြေးထွက်ခဲ့သည်..။ မှားပြီ…..ချိုရီ….၊ ပွယောင်း ပြေကျနေတဲ့ ဆံပင်တွေ..၊ ကျယ်သီးပြုတ်နေတဲ့ …အင်္ကျီ..၊ လုံးထွေးဝတ်ထားတဲ့ ထမီ..ဖရိုဖရဲ….ချိုရီ့နောက်မှ အဖေက အခန်းထဲမှ ထွက်လာသည်..။ အဖေရင်ဘတ်ကြီးတွင် ချွေးများစို့နေသည်ကို …..တွေ့မြင်လိုက်ရလေတော့သည်…